Ka Caawinta Qof Inuu Cuno Cunto Caafimaad Leh | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
La Soo Geliyay: Abriil 05, 2021
Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Context link Maarso04, 2022 Context link
Cunnista cunto caafimaad leh waxay muhiimad u leedahay da' kasta, balse baahiyaha cunto way isbeddelaan marka aan sii waynaanayno. Markaan duqoobayno, jirkeena wuxuu u baahan yahay cunto yar. Balse jirkeenu wuxuu u baahan yahay nafaqooyin badan oo gaar ah. Sidaas darteed, cunnista cuntooyinka saxda ah ayaa noqonaysa mid aad muhiim u ah.
Goor dambe oo nolosha ah, cuntadu waxay sidoo kale noqon kartaa mid ay aad u adag in la dheefshiido. Sidoo kale, caafimaad-darrada ayaa noqon karta qodob. Sonkorowga, niyad-jabka iyo dhibaatooyinka kale ee caafimaadka waxay saameyn karaan wax cunnista. Daawooyinka qaarkood ayaa sababi karaan isdhexgalka daawada iyo cuntada ee aan loo baahnayn sidoo kale.
La yaab ma lahan in daryeelayaashu ay ku adagkaato inay ka caawiyaan dadka ay daryeelaan inay cunaan cunto caafimaad leh. Waa inaad raacdaa tilmaamaha laga helo dhakhtarka qofka, balse xaanshidan tilmaamaha ayaa sidoo kale ku caawin kara. Akhri si aad u ogaato qaababka aad uga gudbi karto caqabadaha caadiga ah ee cunnista cunto caafimaad leh.
5 talooyin ku saabsan samaynta doorashooyinka cunto caafimaad leh Context link
Waa maxay cuntada u fiican ee loogu talagalay waayeelka? Taasi waa su'aal caadi ah. Waxaa laga yaabaa inay jiraan arrimo gaar ah oo khuseeya dadka waaweyn qaarkood ama dadka qaba naafonimada. Bale xeerarka guud ayaa ayaa wada khuseeya. Talooyinkaan 5 way fiican yihiin si looga caawiyo ku dhawaad qof kasta, oo ay ku jiraan waayeelka ama qof qaba naafonimo, inay gaaraan dooqashada cunto caafimaad leh:
Iska dhin cuntooyinka iyo cabbitaannada ay ku badan yihiin sonkorta, milixda iyo dufanka buuxa
Isku day inaad kala bar saxankooda ku buuxiso miro iyo khudaar
Wax ku kari saliid caafimaad leh, sida afakaadhada ama saliid saytuunka, halkii aad ku karin lahayd dufanka adag sida subagga
Isticmaal mindaawaad iyo dhirayn si aad dhadhan ugu yeesho cuntada, waayo qofka aad daryeesho waxaa laga yaabaa inuu lumiyay qaar ka mid ah dareenkooda dhadhanka iyo urta
Weydii dhakhtarka kahor inta aadan ku darin fiitamiino ama nafaqooyinka kabista ah cuntada maadaama qaarkood ay dhibaato u keeni karaan daawooyinka
Qorsheyaasha caafimaadka ee labada ah waxaa ku jira faa'iidooyin badan oo dheeraad ah kuwaas oo nolosha u fududayn kara shakhsiyaadka dakhligoodu hooseeyo Context link
Sida looga gudbo caqabadaha caadiga ah ee wax cunnista
Waa kuwaan dhibaatooyinka wax cunnista ee caadiga ah iyo qaababka gacan ka gesyan kara sidii looga gudbi lahaa:
Wax ruugis/calalis la'aanta
Ilkaha iyo cirridka ayaa isbedeli kara marka la waynaado, taasoo ka dhigi karta in la calaliyo cuntooyinka qaarkood. Dooro cuntooyinka jilicsan sida miraha bisil ee iniinta laga bixiyay, malaayga tuunaha ee qasacadaysan, lawska shiidan ee la mariyo muuska, iyo maraq cusbada ku yar tahay.
Wax liqid la'aanta
Dadka waaweyn waxay u muuqdaan kuwa sameeya candhuuf yar. Taasi waxay adkeyn kartaa in la liqo cuntada waxayna xitaa horseedi kartaa in la mergado. U sheeg dhakhtarkooda haddii qof aad jeceshahay dhibaato ka haysato liqitaanka cuntada
Isku day inaad ku darista cuntooyinka fudud maalintii oo dhan. Burcadka iyo buskudka badarka buuxa ah, tufaaxa la jarjaray ee leh lawska shiidan, ama ulaha seleriga ee lagu ee la dhex geliyay salarka tuunaha dhammaan waa xulashooyin caafimaad leh.
Niyad-jabku wuxuu mararka qaarkood sababi karaa cunto-xumo. Markaas waa waqtigii la wici lahaa dhakhtarkooda.
Wax cunnis la'aanta
Qofka qaba naafonimada, dhibaatooyinka jireed ayaa ku sii adkeyn karaan inuu wax cunno. ALS, lafo-beelka, cudurka Parkinson iyo faaliga ayaa ah jirrooyin yar oo ka dhigi kara wax cunnista mid adag. Raadso fargeetooyin, malqacado, saxamo gaar ah iyo agab kale.
Ka taxaddar cudurka cuntada ka dhasha
Dadka waaweyn ee da'doodu tahay 65 jir iyo ka weyn waxay u badan tahay in isbitaal loo dhigo cudur cuntada ka dhashay. Waa kuwaan qaar ka mid ah qaababka gacan ka geysan karaan in la dhimo halista:
Si fiican u dhaq gacmaha, mindiyaha, fargeetooyinka, malqacadaha iyo saxamada
Ha ahaadaan nadiif sagxadaha wax lagu kariyo iyo wax lagu cunno
Ka sooc hilibka ceyriinka ah, hilibka digaaga, kalluunka iyo ukumada cuntooyinka diyaarka u ah in la cunno
Ku kari cuntooyinka heerkul aad u sarreeya si uu u dilo jeermiska (cuntooyin kala duwan ayay tahay in lagu kariyo heerkulo kala duwan)
Qaar ka mid ah qorshooyinka caafimaadka ee laba u qalmitaanka waxaa ka mid ah lacagaha lagu iibsado cuntada caafimaadka leh Context link
Cunista cuntada caafimaadka leh way adkaan kartaa marka la haysto miisaaniyad xaddidan. OTC+Healthy Food waa faa'iido qiimo badan leh kuwaas oo lagu daray qorshayaasha caafimaadka laba-geesoodka ah ee ka socda UnitedHealthcare. *Faa'iidadaan ayaa siineysa xubnaheena dhibca ay ku gataan badeecooyinka OTC iyo raashiinka caynsan ee tafaariiqlayaasha badan. Dhibcaha waxa lagu shubaa kaadhka prepaidka ah, kaas oo xubnaha ay ku bixin karaan barta jeeg-bixinta. Waxay u isticmaali karaan dhibcahooda inay ku iibsadaan miraha iyo khudaarta, hilibka iyo kalluunka, waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo cuntooyinka kale ee caafimaadka leh lacag la'aan.
Qorshayaasha caafimaadka ee laba u qalmitaanka waxaa loogu talagalay dadka u-qalma Medicaid iyo Medicare labadaba. Context link Qorshayaasha caafimaadka ee labada ah waxaa ka mid ah faa'iidooyin badan oo dheeraad ah kuwaas oo nolosha u fududayn kara shakhsiyaadka dakhligoodu hooseeyo. Context link Dhibcaha lagu iibsado alaabta OTC iyo raashinka caymisan waa hal tusaale. Context link Eeg dhammaan macaashyada kale ee qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ay bixin karaan.
* XUSUUSIN Faa'iidooyinka waxay ku kala duwan yihiin qorshaha iyo goobta adeega. Context link Xaddidyo iyo ka-saarid ayaa khuseeya. Faahfaahinta saxda ah ee faa'iidada OTC+ Healthy Food ee ay ku jirto Qorshahaaga 2022 ee Labada Baahida Gaarka ah, wac lambarka ama booqo website-ka ku daabacan dhabarka dambe ee OTC+Kaarkaga Cunnada Caafimaadka leh. Context link
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 03.22.2022 waqtiga 11:35 SUBAXNIMO CDT